IGite Les Farges, iSaint Martial d'Albarede.
I-Gite Les Farges yindawo eqaqambileyo nenomoya ejonge emazantsi-ntshona, ezimeleyo. Inxalenye yepropathi endala kakhulu, igite ikwilali encinci yaseLes Farges, kwidolophu yaseSaint Martial d'Albarede, kufutshane ne-Excideuil. Le gite izolileyo imiselwe ngokukhululekileyo kubantu ababini abanazo zonke izibonelelo eziqhelekileyo kunye nezixhobo. Ngaphandle, kukho indawo encinci yabucala kunye neendawo zokupaka ezikhuselekileyo ngaphandle kwendlela. Uya kufumana ukwamkelwa ngokufudumeleyo kubanini uAnne kunye noBrian abenze igite ngo-2020.
I-Gite Les Farges yindlu ezimele yodwa ye-c.40 sq.m, equka igumbi lokulala elitofotofo elinesibini, igumbi lokuphumla elimnandi/ikhitshi/igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlambela elineWC, isitya sokuhlamba izandla kunye neshawari. Ekufikeni kwabo, iindwendwe ziya kufumana iPakethe yoKwamkeleka kwaye ziya kukwazi ukuboleka ibhaskithi yepikiniki yohambo lwemini, ukuba kuyafuneka. Ngaphandle, kukho indawo yabucala enetafile nezitulo zokutyela ngaphandle, iindawo zokuhlala elangeni, indawo yokosa inyama kunye nomthunzi omninzi. Izinyuko ezintlanu zamatye ezibanzi, ezinesitayile, ezikhokelela kumnyango wangaphambili.
Indawo yasemaphandleni entle esemantla eDordogne iqala ngaphaya kwendlela ukusuka egite kwaye kukho ukuhamba okungapheliyo kunye nokukhwela ibhayisekile macala onke, kunye nokuqesha ibhayisekile kufumaneka kufutshane. Idolophu ezolileyo neyimbali ye-Excideuil ikumgama nje wemizuzu emithandathu ngemoto kwaye inezakhiwo ezimangalisayo zakudala, ihotele encinci, iivenkile zekofu, imakethi yasesitalatweni yakusasa ngoLwesine, iivenkile ezimbini ezilungileyo kunye nequla lokuqubha likawonke-wonke elibalaseleyo.
UAnne noBrian bahlala kwindlu enkulu eqhotyoshelweyo kwaye baya kukwazi ukukunceda wenze okona kulungileyo kokuhlala kwakho. U-Anne une-studio ye-yoga endlwini kwaye unokujoyina iklasi okanye ubhukishe iseshoni yangasese, ngelixa uBrian enomdla webhayisikile kwaye unokucebisa ngeendlela ezinomdla ezikufutshane.
UAnne noBrian bahlala kwindlu enkulu eqhotyoshelweyo kwaye baya kukwazi ukukunceda wenze okona kulungileyo kokuhlala kwakho. U-Anne une-studio ye-yoga endlwini kwaye unokujoyina ik…